Ulwakha njani uKhenketho ngezepolitiki. Umsebenzi ongenokwenzeka?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » komzila Ngoku » Ulwakha njani uKhenketho ngezepolitiki. Umsebenzi ongenokwenzeka?
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • udliwano • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • komzila Ngoku • I-WTN
Septemba 26, 2021
9 imiz efundwayo
Ukwakha uKhenketho kwakhona emva koCovid-19 ngumbuzo obuzwe ngumcebisi wezokhenketho waseJamani uMax Haberstroh.
Uziva enomdla wokufumana indawo eyomeleleyo emva kokuba ubhubhane sisitshixo sokwakha kwakhona.
Inkcubeko kwezentlalo, kwezendalo nakwezoqoqosho kumthombo nakwiimarike ekujoliswe kuzo kunye noluntu lwabo kunye (nabanakho) ukubamba iindwendwe kunye neendwendwe;
Uhambo novavanyo lwezoKhenketho, ubungakanani bokubaluleka kwalo kwindawo yethu, nokuba luqine kangakanani ukhenketho olunxibelelene namanye amacandelo kunye namashishini ahambelana noko;
Ukulungelelaniswa kwakhona kwesakhelo sepolitiki ukukhulisa ezoKhenketho noKhenketho njengeshishini elivelayo lenkonzo, kunye nokuxhamla kuKhenketho njengezixhobo zonxibelelwano, ukuze kuphuculwe uphawu lweambrela kunye nomfanekiso wendawo / indawo ekuyo yonke indawo - njengendawo ukuhlala, ukusebenza, ukutyala imali, kunye nokuhamba.
Ukuhamba noKhenketho lushishino oluzinikele ekwenzeni amaphupha azaliseke, akhokele iminqweno yabantu endleleni yokuhamba simahla, bonwabele ulonwabo kunye nolonwabo, ezemidlalo kunye nokuzonwabisa, ubugcisa nenkcubeko, ukuqonda okutsha kunye neembono. Ngaba ezi ayizizo iipropathi eziphambili ezenza ukuba ubomi bomntu buxabiseke ngakumbi? Ngaba uKhenketho noKhenketho, ke, awufumani lizwi lokuqala kwizinga lendawo, lommandla, likazwelonke, kunye nehlabathi elikhuselayo amalungelo oluntu kunye nokukhuthaza imisebenzi yoluntu?
Ngexesha lokukhohlisa, ukukopa, iindaba ezingeyonyani, intetho ethandwayo, kunye nentetho enentiyo, uKhenketho lubonelela ngeqonga lokuyila, luvuse indalo kunye nobunqabileyo, ubugcisa kunye nokuqaqanjelwa okwahlukileyo kwelifa lemveli kunye 'neDisney' yabo ephefumlelweyo 'umhlaba wesibini'. Akukho sidingo sokwenza iidemon into eyenziweyo konke konke: Nangona kunjalo, ngaphandle kokutyeshela izinto ezingezizo, uKhenketho lujolise 'kwinyani' - kwaye siyazi: 'Umhlaba wobugcisa ophefumlelwe yintliziyo- kunye' nobugcisa ', kwaye ke ngenxa yoko uzinikele kwimbonakalo yeklasikhi' yeNyaniso, entle neLungileyo '.
Nangona zahlulwe zangamawaka ambalwa 'eentlanzi ezinkulu' kunye nezigidi zamashishini abucala naphakathi (ii-SME) zabucala kunye namaziko oluntu, uKhenketho noKhenketho luziqhayisa ngokuba lolona shishino lukhulu emhlabeni - ludlamkile ziinjongo kwaye luzimisele ukukhonza kunye ukubonelela ngamava okuhamba anomdla. Ngaphaya koko, uKhenketho luzijonga njengelona shishini lokuqala loxolo. Ngaba oku kuyaziwa nakubani na ongaphandle kwecandelo? Ngaba uKhenketho noKhenketho luza kule ndawo intle kangaka?
Umbono wokuhamba kwihlabathi xa ukhuthaze uThomas Cook ukuba alungiselele ukhenketho lokuqala lwephakheji. Kwiinkulungwane kamva, umbono wokuhamba ngokukhululekileyo unqamle imida wajika waba yivektha eyakhokelela kwimiboniso yangoMvulo yeMpuma Jamani. Ngokudibeneyo neenkokheli zehlabathi ezithanda inkululeko, 'injongo yabantu' ekugqibeleni ayikhokeleli nje ekuweni kweengcinezelo zolawulo lwamaKomanisi kunye nokuwa okumangalisayo kodonga! Olunjani lona utshintsho! Olunye uhlobo kunzima ukuphinda.
Ngokubuyisa, nangona kunjalo, iipateni ezindala zibonakala ngathi ziyavela kwakhona: Ewe, sitshintshile ukusuka kwiMfazwe ebandayo saya kuXolo ngoxolo, sisazi kakuhle ukuba oku kungaphezulu komkhosi wokulwa. Ngaba yile nto besiyifuna?
Emva kokuwa kodonga, amathuba kunye nolwakhiwo lwamathuba njengokunyuswa kwexesha, ukulungele ukuthathwa. ISoviet Union yaqhekeka, iRussia yayisengxakini, ukanti uMongameli u-Yeltsin, owayebhukuqa umbuso, wazibonakalisa omelele ngokwaneleyo ukuthintela ukubhukuqwa kwezopolitiko. Emva kweminyaka elishumi owangena ezihlangwini zakhe, uPutin, owayejongwa “njengomntu olawulwa ngentando yesininzi ongenasiphako” (nangona u-chancellor owayesakuba ngu-Schröder wayevavanya ngokungxama), wathetha kwi-Bundestag yaseJamani kwaye wavuya kuwo onke amaqela. Isivumelwano seWarsaw sachithwa, kodwa i-NATO, inomdla wokukhulula abantu baseMpuma Yurophu kwindyikityha yesoyikiso 'yaseRussia', yathatha ixesha ngokubekwa phambili kwaye yandiswa ngasempuma. I-Russia yaziva ikhutshiwe, kwaye ulwazi lwayo olukhulayo lokuba yinxalenye ye-Europe lwalungakhathalelwanga. Umdibaniso wasentshona uzibonakalise unomdla kwezomkhosi kodwa ujonge phambili kwezopolitiko. Namhlanje, endaweni yokunika inyama kumoya wokuqala wobambiswano lwaseYurophu-neRussia, kungcono silumkele ukwanda kweRussia.
Elinjani ithuba elilahlekileyo kwii-1990s zakuqala 'zokuba nobuganga kwihlabathi elitsha elinobukroti': ukuvula iRussia i-Europe kunye ne-West kwaye baphose zonke ezo zinto zibolileyo zoMlo obandayo ngaphandle kwesakhiwo sabo sezopolitiko esinetyhefu. "I-NATO iphelelwe lixesha" - ayinamsebenzi, kuba yayinguTrump nje ukuyithetha loo nto? -
Liliphi ithuba elilahlekileyo ziinkokeli ezinombono kurhulumente, kurhulumente nakwinqanaba eliphezulu kumashishini ukubonisa ukubona kwangaphambili kunye nomdla, nokuthetha phandle? Eli lithuba elingaphumeleliyo loKhenketho noKhenketho, elona shishini liphambili loxolo emhlabeni, lokushiya inqaba yabo yobuchwephesha yobuchwephesha kwaye bayenze ibe sisibane semitha yelanga: ukumiliselwa kwezibheno ezingqongqo, ukulamla iintlanganiso zamacandelo ezinqamlezo zamazwe. uququzelele imicimbi yenkcubeko, uncede ukomeleza ukuthembana nokuzithemba kunye nokuthumela imiyalezo eqinileyo yoXolo ngezoKhenketho kubantu kwisiphithiphithi?
Awu, ithuba lezopolitiko lolu hlobo ligqithile, kwaye izimvo zokuyila indawo yokuguqula izinto ziye zaphikwa okanye zashiywa zingaviwa.
“Ekuqalekeni bekukho igama”: Kukho iinzame kule mihla- ngamanye amaxesha zinokuthandabuza njengoko zinjalo, kuyavunywa -ukuthiya amagama aqhelekileyo: Ke, 'umamkeli' olula uphuculwe ubuncinci ngolwimi ukuba abe 'ngumphathi wesandi'. Ukuba kugxilwe 'kwisandi', imibutho yoKhenketho kunye nezoKhenketho kufuneka ihambise le mbono, inyuse isandi sayo kunye nokubonakala kwinqanaba lezinto 'ezinokubangela intlalontle', endaweni yokugcina ubungangamsha babo njengexhala lokuthetha, bezilungiselele ukuhlala ubuchwephesha bemihla ngemihla kunye nezithintelo kumzi-mveliso wabo woqhekeko.
Obu abukho nje obunye ubungqina bokuba abaphathi bokubuk 'iindwendwe' bayaziphikisa: 'ukugcina ezopolitiko ngaphandle kwezokhenketho'. Ewe, kunokuqondakala xa ujonga ukubandakanyeka kwezoKhenketho kwimigaqo-nkqubo yemihla ngemihla: Ezokhenketho, ukuze zisebenze ngokukhululekileyo, kufuneka zikhululwe kwi-corsets yolawulo lukarhulumente kwaye zinikwe uhlobo olwahlukileyo lomthetho wabucala endaweni yoko. Nangona kunjalo, kukho ukungqubana okukhulu ukuba uKhenketho luyacetyiswa ukuba lube ngumdlali weqonga 'ngaphandle kwezopolitiko' konke konke.
Ngokwenyani, i-UNWTO, i-WTTC, kunye neminye imibutho ekhokelayo kuKhenketho noKhenketho ayinakuqondwa luluntu jikelele 'njengeetotshi zokudlulisa' iNyaniso, intle, kwaye ilungile, ezinikele ekubonakaliseni nasekusebenzeni ngaphaya kwemida yoKhenketho. uqobo kunye nokuzalwa kwayo okungapheliyo.
Kuya kufuneka ukuba baqale ngcono ukwenza oko, xa kujongwa uphuhliso lwangoku kunye nasemva kwesifo sikaCovid-19, kwaye ngenxa yeentlekele kwezendalo kunye nezidubedube zasekuhlaleni. Kunyanzelekile ukuba icandelo lezoKhenketho noKhenketho lisebenze ngokuzimeleyo kunye nakwizenzo ezimanyeneyo nabadlali beqela lesizwe nakwamanye amazwe bayayixhasa i-Ajenda yowama-2030 yoPhuhliso oluZinzileyo. Nangona kunjalo, sithathe konke ukulunga okuhle kunye kunye namandla ezobuchwephesha kunye, asinakufikelela kwi-1,5-degree ephezulu yeqondo lobushushu elimiselwe ngu-2040 sele, umzekelo, amaqela ezopolitiko aseJamani acinga, ukuze alwe nefuthe lokushisa komhlaba. Ke ngoko, ngaphandle kokomeleza iinzame zethu zokuqulatha utshintsho lwemozulu, kufanelekile ukuba sibonelele ngesabelo sethu ukutyala imali yokusebenza kwengqondo kunye nemali ekucaciseni indlela yokuphila kunye notshintsho lwemozulu. Ukufumana izisombululo kuya kubaluleka ekugcineni inkululeko, intlalontle kunye noxolo. Ngaba i-mission ayinakwenzeka? - Sukuthi ngekhe!
Ukuhamba kunye noKhenketho, njengeshishini loxolo elicinga ukuba liNombolo-yokuQala, alunakho ukuzibamba kude nokuzibophelela kwezopolitiko kunye noxanduva- lumi embindini wayo yonke, kwaye kufuneka lizame ukukhokela ukubonakala kwayo, indawo elikuyo, kunye nezisombululo zalo Ngokubambisana namaziko aneengcinga ezifanayo, imibutho, kunye neenkampani, ezinje ngezikolo kunye neeyunivesithi, imibutho yoluntu neyesisa, ezothutho / zokuhamba kunye necandelo laMandla aVuselelekayo, ukuthuthwa kwenkunkuma, ulawulo lwamanzi namanzi amdaka, ukhuselo nokhuseleko, ulwakhiwo loluntu… Ukuhamba & Ezokhenketho kufuneka zonyuse ubunzima bezopolitiko ukubonelela ngemikhankaso yamacandelo entlalontle kunye nokusingqongileyo ngeyona mpembelelo iphezulu kunye nenqanaba lokomfuziselo elinokwenzeka.
USuku lokuCocwa kweHlabathi kutshanje, lwamkelwe kakhulu eNtshona kwaye, njenge 'subbotnik' (eneneni 'uMgqibelo' wokucoca), owaziwa eRashiya naseMpuma Yurophu, ngewawungumzekelo ogqibeleleyo ukuqala ngawo, njenge-prelude enenjongo minyaka le uSuku loKhenketho lweHlabathi ngoSeptemba 27.
Ngaba unqwenela ukucinga kuphela?
umbhali UMax Haberstroh, Umcebisi wezoKhenketho eJamani, Ilungu leNethiwekhi yoKhenketho lweHlabathi
Inyaniso elula Inqaku elipapashwe nguMax Haberstroh.